वडाध्यक्ष रोजगारीका लागि कोरियामा ! "उपचुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?" -सांसदको प्रश्न - Fonij Korea
वडाध्यक्ष रोजगारीका लागि कोरियामा ! “उपचुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?” -सांसदको प्रश्न
जनताको सेवा गर्छु भनी भोट लिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि देशै छाडेर हिँडे भने कानुनले के भन्छ ? खाली रहेको पदमा उपचुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?
यो प्रश्न सर्वसाधारणले होइन सांसदले प्रतिनिधिसभामा उठाएका हुन् । संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का निर्वाचित वडाध्यक्ष बलहादुर घले वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया गएपछि सांसद राजेन्द्र गौतमले मंगलबार संसदमा यो प्रश्न गरे ।
घले ईपीएस कोटाबाट कोरिया गएपछि वडा सदस्यलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको छ । संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद गौतमले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपचुनावमा सो वडामा वडाध्यक्षको चुनाव हुन्छ कि हुन्न भनी प्रश्न गरे ।
गौतमले भने–जनताको सेवा गर्छु भनी जनताको निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले देशै छाडेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दा कानुनले के भन्छ ? कानुन अनुसार मृत्यु भएमा वा अन्य कारणले रिक्त रहेमा उपचुनाव हुने भनिएको छ । अब त्यो पद खाली हुन्छ कि हुन्न ? सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारोस् ।